PNGImg: Soo dejiso kumanaan sawir oo bilaash ah qaabka PNG | Abuurista khadka tooska ah
Markii aan ka shaqeyno mashruuc kasta oo ka socda Photoshop, mid ka mid ah howlaha ugu shaqada badan waa goosashada sawirrada. Runtu waxay tahay in sheygu uusan halkaa ku joogsan maxaa yeelay kaliya ma ahan inaan jarno walxaha ama astaamaha aan ku dhejino halabuurkeena, laakiin sidoo kale waa inaan helnaa sawirada saxda ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo marayo PNGimg waxaan badbaadin karnaa waqti badan maxaa yeelay waxaan badbaadinaa waqtiga aan ku qaadno labada shay. Ku saabsan yahay bangiga weyn ee sawirada qaab png markaa walxaha iyo jilayaasha ku jira sawirrada waa la gooyey oo diyaar ayey u yihiin in lagu daro faylka psd. Maaddaama uu yahay bangi aan duug ahayn, waxaa laga yaabaa inuusan mar walba na siinin ilaha aan u baahan nahay, laakiin waa ikhtiyaar wanaagsan oo aan ku dari karno shandadeena kheyraadka.
Boggan wuxuu leeyahay menu aad u kaladuwan oo ay ku jiraan tiro aad u tiro badan oo noocyo ah sida baabuurta, dabeecadda, dhirta, dadka ama khiyaaliga ah. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa mashiinka raadinta si aan u helno walxaha aan raadineyno. Waxay sidoo kale leedahay ikhtiyaar aad u faa'iido badan oo kuu oggolaan doonta inaad kala soo baxdo xirmo qaab zip ah oo leh sawirro kala duwan oo mowduuc guud ah oo horayba loo gooyay, sidaas darteed waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido badan oo dhaqso badan marka la gelinayo oo lagu dhex darayo shiraacaaga. Inta ugu fiican oo dhan, waa bog bilaash ah oo laga heli karo. Uma baahna wax diiwaangelin ah dabcan waa bilaash.
Waxaad ka heli kartaa bangigan muuqaalka ah cinwaanka soo socda: http://pngimg.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » PNGImg: Ku soo dejiso kumanaan sawirro bilaash ah qaabka PNG
Immisa farshaxan ayaa ku jira degelkan, mahadsanid !!
Ku jawaab alricotomate
Sidee muhiim u yihiin kerning iyo raadinta xarafka?